Andriamalazaray Andoniaina: “Zava-dehibe ny fahasalaman’ny isam-batan’olona” | NewsMada
Andriamalazaray Andoniaina: “Zava-dehibe ny fahasalaman’ny isam-batan’olona”
Mitohy ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Hanao ahoana? Maneho ny fijeriny ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe Fanabeazana olom-pirenena, Andriamalazaray Andoniaina: “Zava-dehibe ny fahasalaman’ny isam-batan’olona.” Dinidinika…
Gazety Taratra (*): Ahoana ny fahitanao ny amin’ny fitsarana ireo tomponandraiki-panjakana ambony eo anivon’ny Fitsarana avo?
Andriamalazaray Andoniaina (-): Ho anay, tsy manaja fitsipika ny Fitsarana avo na ny Haute cour de justice (HCJ). Ny fitovian-jo manoloana ny lalàna izany. Araka ny teneninay ombieny ombieny: tsy mitovy raha samy mangalatra akoho, ohatra, ny manampahefana na ny tomponandraiki-panjakana ambony iray sy ny olom-pirenena tsotra iray. Fitsarana ambaratonga voalohany ny itsarana ny olom-pirenena tsotra; fa ho an’ny manampahefana na ny tomponandraiki-panjakana ambony, tsy maintsy mandalo amin’ny Fitsarana avo.
Na inona na inona lazaina sy tantaraina, inona, ohatra, ny dikan’ireny hoe “écran plat” ireny, “bonbon sucette” ireny, “panier granier” ireny… ? Vakina fotsiny ireny. Vakina na henoina, ohatra, ny fanambaran’ny mpitondra androany, vakina na henoina ny fanambarany ny ampitso: hita avy hatrany hoe misy zavatra tsy mitohoka… Inona ny misakana antsika tsy handray fepetra amin’ireny toe-javatra ireny fa tsy maintsy mandalo Fitsarana avo?
Nefa ny an-tanan-tohatra sy ny pitsompitsony tsy maintsy hajaina amin’ny Fitsarana avo efa mihidy mialoha. Raha manontany, ohatra, ny olona hoe: inona ny atao manoloana an’izany? Raha ny tena izy, tsy misy ilàna ny Fitsarana avo.
* Amin’ny maha mpanara-maso ny fiainam-pirenena anareo, inona ny tena andrasan’ny vahoaka amin’izao taona vaovao izao?
– Miandrandra fihatsaram-piainana ny ankamaroan’ny olona amin’izao, raha mbola olona hoe salama tsara: mba hihatsara ny fari-piainany. Rehefa midina, ohatra, ny vidin-tsolika eo amin’ny tsena iraisam-pirenena na ny “baril”, mba midina izany eny amin’ny mpaninjara solika. Fa tsy hoe tsy misy fiantraikany amin’ny mpaninjara solika izany, rehefa midina ny vidiny. Nefa rehefa miakatra ny vidin-tsolika eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, miakatra koa ny vidiny eny amin’ny mpanijara. Dia tsy mitsaha-miakatra izany…
Ny fanirian’ny olona, mba mifanakaikikaiky ny vola Ariary sy ny vola vahiny. Tsy hita taratra loatra ny fahabangana eo amin’ny hoe fiakaran’ny vidim-piainana. Ny mpahay toekarena no miresaka izay hoe vidim-piainana izay fa ny fanirian’ny olona amin’ny fiantraikan’izay: mitombo ny fahafaha-mividy; mitombo ny fahazoana manao zavatra metimety kokoa ho an’ny fianakaviany sy ny fiarahamoniny. Milamina ny olona rehefa izay zavatra izay no tanteraka. Tsy miraharaha izay ataon’ny mpitondra ny olona, rehefa tsara ny fivelomany sy ny fiainany.
Ny mahatonga ny olona ho taitaitra: nahoana, ohatra, no tsy maintsy manaja ny fepetra sakana ara-pahasalamana amin’ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 isika? Nefa misy ihany ny famoriam-bahoaka, ohatra, amin’ny fampisehoana, na nyfanatanjahantena toy ny baolina kitra… Misy fifanoherana izany, mahatonga ny olona tsy hatoky rehefa misy zava-mitranga. Ny fiainany milamina no tadiavin’ny olona: miaina tsara araka ny tokony ho izy, misy lanjany ny zavatra vokariny sy ny asa ataony…
* Ahoana tokoa ny amin’izay ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izay?
– Ny fanentanana ny olom-pirenena rehetra… Marina tsy hita maso toy ny pesta sy ny tazomoka, ohatra, ny tsimokaretina Coronavirus na ny valanaretina Covid-19. Mety hoe tsy maha te hino ny zavatra ambaran’ny mpitondra sasantsasany satria tsy mifanaraka amin’ny ataony. Na izany aza, zava-dehibe ny fahasalaman’ny isam-batan’olona.
Farafaharatsiny, rehefa tsy hijery ny manodidina sy ny fiarahamonina ny tena, mba mijery ny tena sy ny fianakaviana: tokony hohajaina hatrany ny fepetra sakana ara-pahasalamana hiarovan-tena amin’io valanaretina io. Tokony hanasa tanana matetika amin’ny rano sy ny savony isika; miezaka tsy mifampitankosina loatra fa manaja ny elanelana iray metatra farafahakeliny; indrindra, miaro ny manodidina ny tena rehefa manao arovava ary miaro ny tena rehefa manao arovava sy orona mitambatra. Satria miditra eo amin’ny orona ny tsimokaretina Coronavirus ka miaro ny tena izany rehefa manao arovava sy orona.
Na ao Antananarivo sy ny manodidina izany, na ao Fianarantsoa sy ny manodidina, ao any Antsiranana sy ny manodidina… Tokony hitandrina sy hiezaka amin’izay avokoa ny tanàn-dehibe sy ny distrika rehetra.